Ball Madax, Balanbaalis Madax, Hubi Madax - DEBIEN
Tayo sare leh DIN F5 bir kabka flange toosan g ...
Warshad si toos ah uumi heerkulka sare ee 600 600 c ...
Xoog-sarreeya iyo daxal-adkaysi Jarmal st ...
Shiinaha warshad qiimaha birta ductile bir nooca y ...
Debien wuxuu ku sii socdaa waqtiga, cusbooneysiinta qalabka, si xeel dheer ayuu u xardhay astaanteena, wuxuu diirada saarayaa soo saarida alaabada dhamaadka sare, iyo si firfircoon uga jawaab celinta dalabaadka suuqa ee hal abuurka.
Sanadihii la soo dhaafay, Debien wuxuu markhaati ka ahaa wacyiga sii kordhaya ee injineernimada iyo duurka caalamiga ah, wuxuu aasaasay xiriir wadashaqeyn muddo dheer iyo xasiloon oo lala yeesho shirkadaha caanka ah iyo kooxo dhowr ah oo heer caalami ah sida batroolka, batroolka kiimikada, daryeelka biyaha iyo
Waa Maxay Glove Valve Goormaana La Sameeyaa ...
Globe valves waxaa lagu maamulaa lugo gacmeed waxayna sidoo kale xakameysaa wareegga biyaha. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale abuuraan cadaadis lumis weyn. Doorashada waalka saxda ah waa lagama maarmaan, maaddaama noocyo kala duwan ay ku kala duwan yihiin ...
Baadhitaannada hubinta ayaa guud ahaan lagu rakibay dhuumaha si looga hortago dib u soo noqoshada. Waalka jeeg asal ahaan waa waalka hal-waddo, qulqulka ayaa si xor ah ugu socon kara hal jiho, laakiin haddii socodka qulqulo, waalka ...
Talooyinka Dayactirka Iyo Dayactirka Balanbaarta ...
Waalka balanbaalisku waa nooc ka mid ah qalabka nidaaminaya socodka, kaas oo ay ku jiraan saxanka wareegaya si uu ugu shaqeeyo dareeraha socodka. Meesha taagan ee waalka balanbaalisku, waxaa ku yaal m ...
SOO SAARKA UGU DANBEEYA
Y Nooca Cadaadis culus shaashad shaashadda biibiile culus i ...
Shiinaha y nooca alaab-bixiyaha miirayaasha
DIN3352 F4 Fasalka Madax 8 Gost Ductile Cast Iron ...
Globe Qalubyada Globe Control Valve Bellows Contro ...